वहाँ एसईओ चहचहाना को लागि कुनै पनि रणनीति हो?
2017 मा, एसईओ एक ठूलो विपणन च्यानल मा विकसित भएको छ. आज, खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसन केवल खोजी ईन्जिनियरिङ् द्वारा स्थानित स्रोतहरु को बारे मा छैन. एक बेहतर समझ को लागि एसईओ के बारे मा, तपाईं पहिलो तरिका मा सोशल मीडिया प्रभाव एसईओ मा बुझ्नैपर्छ.
यो पहिले नै साबित भएको छ कि सोशल मिडिया सगाई उच्च वेबसाइट रैंकिंग को एक अभिन्न भाग हो - usando o flash externo. सामाजिक संकेतहरूले तपाइँको स्थानीय एसईओ रेटिङ बढाउन पनि सक्छ.
यो निम्नानुसार काम गर्दछ: तपाईंको समुदायको यो आकार र यसको संलग्नता तपाईंको सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरको मूल्यवान संकेतक हुन्।. के अधिक छ, सोशल मिडियाबाट सामग्री प्राय: Google खोजी नतिजाहरूमा देखा पर्दछ. यही कारणले ठूलो छ, ट्विटरमा लक्षित र तपाईंको ब्रान्डको सामग्रीसँग सगाई तपाईंको व्यवसायको लागि धेरै फायदेमंद छ.
त्यसैले, आज, सेल्टल्ट विशेषज्ञहरूले तपाईंको ट्विटर एसईओ अप्टिमाइजेसनको लागि सबै भन्दा प्रभावकारी सुझावहरूको बारेमा बताउनेछ. तपाईंको निम्न र तपाईंको व्यवसाय बढ्नको लागी तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहोस्.
चहचहाना एसईओ अनिवार्य छ तपाईंले थाहा पाउनु हुन्छ
1. एक प्रभावी चहचहाना एसईओ रणनीति को विकास
तपाईंले गर्नु पर्छ पहिलो कुरा एक सफल रणनीतिक योजना बनाउँदछ. नियमको रूपमा, रणनीतिहरू सामान्य उद्देश्यका साथ सुरु हुन्छ. तपाईंको ब्राउजिङको लागि ट्विटर प्रयोग गरी कुन किसिमको नतिजाहरु निर्धारण गरी आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य परिभाषित गर्नुहोस्. हुनसक्छ, तपाई ब्रान्ड जागरूकता बढाउन, नयाँ सेवा बेच्न वा ब्लग ट्राफिक बढाउन प्रयास गर्नुहुन्छ?
तपाईंले आफ्नो उद्देश्य पहिचान गर्न एकपटक गरेपछि अर्को चरण ती लक्ष्यहरूमा पुग्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति छान्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस्।.
2. ब्रान्डको आवाजमा फोकस गर्दै
मनमा राख्नुहोस्: प्रत्येक एकल ट्वीटरले तपाइँको ब्रान्डलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ. यही कारणले तपाइँका ट्वीट पोस्टहरू सधैँ तपाईंको ब्रान्डको आवाजमा विश्वासी हुनुपर्दछ, तपाईंको ब्रान्ड पहिचान प्रतिनिधित्व गर्ने. निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई अपील गर्दछ.
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्पादन गर्दैछ - तपाईंको टाईमहरू केवल टाइपसका लागि मात्र सम्पादन गर्नुहोस् तर जबसम्म तपाइँ 100% निश्चित हुनुहुन्छ कि प्रत्येक ट्वीटरले प्रत्येक विवरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन तपाइँ ग्राहकहरूसँग साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ।.
3. सतर्कता बढ्दै समुदाय
त्यहाँ कुनै पनि आकार अस्वीकार छैन. तथापि, जब यो चहचहाना आउँछ, सगाई एक राजा हो. अनुयायीहरूलाई तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्नुहोस्, तर सस्तो रणनीतिहरूबाट जोगिन प्रयास गर्नुहोस् - तिनीहरू केवल लगानीको लायक छैनन्.
बरु रोलिंग रोकिनुको सट्टा र यो दुवै र सम्भावित अनुयायीहरू दुवै संलग्न गर्दै हिंड्नुहोस्. बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्न शुरू गर्नुहोस् जुन मानिसहरू संलग्न गर्न र साझेदारी गर्न चाहन्छन्. अर्को कुरा उत्तरदायी हुनुपर्दछ - मानिसहरूको प्रश्नहरू र टिप्पणीहरूको उत्तर दिनुहोस्, सीधा ट्वीट्सहरूको जवाफ दिनुहोस्. कुनै पनि टिप्पणीहरू रद्द गर्न नबिर्सनुहोस्, तपाईंको टिप्पणीहरू थप गर्नुहोस्.
4. दायाँ कुञ्जीपाटी चयन गर्दै
तपाइँको सामग्रीलाई सजिलो बनाउनको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंले आफ्नो चहचहानालाई कुनैपनि खोज इन्जिन जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ. प्रत्येक एकल ट्वीटरमा सान्दर्भिक किवर्डहरू प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्. हैशग्स, जैव र चित्रवर्णनहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस् - उनीहरूले तपाइँको ट्विटर पृष्ठलाई पनि मद्दत गर्न सक्दछन्.
सम्झनुहोस्, प्रायजसो अवस्थामा, मानिसहरूले खोजशब्दहरूको लागि ट्विटर खोजी गर्दैछन्. यसरी, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको खाता तपाईंको व्यापारसँग सम्बन्धित के लागि देखाउँछ.
5. तपाईंको चहचहाना ट्राफिक ट्र्याक गर्दै
जस्तै तिनीहरू भन्छन्, के उपायहरू बढ्दैनन्. ट्विटर विश्लेषिकीहरू अहिलेसम्म नबिएको छ? त्यसोभए तपाईं अझ राम्रोसँग जित्नुहुन्छ कि तपाइँ कसरी गरिरहनुभएको छ र तपाईंको सङ्गठन हप्ता-हप्ता ह्याट्रिक ट्रयाक गर्ने तत्काल स्न्यापसट प्राप्त गर्न.
गुगल एनालिसले पनि तपाईंलाई बताउन सक्छ कि ट्विटरबाट तपाई कति पृष्ठ भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ. यो ज्ञानले तपाईंलाई दिनेछ कि तपाइँको ट्राफिकले कति चहचहाना चहचहाना पत्ता लगाउन सक्छ.
हामीले जान्दछौं, चहचहाना एक भीड भएको ठाउँ हो. सन्देशहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाइँले प्रतिस्पर्धाबाट अलग हुनेछ. तपाईंको सामग्री बहुमूल्य र पढ्न सजिलो राख्नुहोस्. सबै भन्दा माथि, यसलाई सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउनुहोस्, किनकि कसरी चहचहाना एसईओ काम गर्दछ.